Nosokafana ofisialy androany tetsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina ny Lalao ara-panatanjahantena ho an’ireo atleta manana fahasembanana eto amin’ny ranomasimbe Indianina. Andiany faha-18 izy ity, andraisan’ny Nosy efatra anjara dia i La Réunion, Maurice, Comores ary Madagasikara mpampiantrano. Efatra ihany koa ny taranja ifaninanana dia baskety, tsipy kanety be, tenisy ary ny boccia. (Jereo Sary Tohiny)
6 noho 2, io no isa nisarahan’ny Barea an’i Madagasikara sy ny « Mena » an’i Niger io hariva io tao amin’ny kianja Général Seyni Kountché ao Niamey renivohitr’i Niger. Ny ekipan’i François Zahoui no nanokatra ny isa voalohany, avy eo nosahalain’i Bôlida minitra vitsy monja taorian’izay, ary dia nanao ranolava ny isa azon’i Madagasikara. Namono baolina faharoa i Bôlida, nampian’i Abel Anicet (penalty) sy Andrea Carolus. Nitarika 4 noho 1 teo ampialan-tsasatra. Mbola namono baolina roa ny Malagasy tamin’ny fidirana faharoa, baolina matin’i Voavy Paulin sy Jérémie Morel. Nivoaka mpandresy ny Malagasy. Sambany teo amin’ny tarantaran’ny baolina kitra Malagasy no nandresy tany an-tanin’olona tamin’ny elanelan’isa lehibe toy ity androany ity ny ekipam-pirenena Malagasy.
Vita omaly ny fifanarahana teo amin’i Andriatsima Faneva Ima, kapitenin’ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny baolina kitra teo aloha sy ny Jovena, orinasa mpaninjara solika eto Madagasikara. Mpitarika mahomby i Faneva Ima, loharanon’angovo nampientana ny Vahoaka Malagasy ary mamaritra ny soatoavin’ny orinasa Jovena ; izay no anisan’ny naharesy lahatra an’ity orinasa ity nifidy azy ho Ambasadaorony. Ho hita amin’ireo toby mpaninjara sy amin’ireo serasera ataon’ny Jovena ny sarin’ity mpilalao baolina kitra malagasy ity.
Mitohy ny asa fanamboarana ny Stade Omnisport d'Antsiranana rehefa nihitsoka nandritra ny dimy taona teo. Nanomboka tamin’ny volana mey 2019 ny asa, ary hovitaina ato anatin’ny enim-bolana, ary ho afaka handraisana lalao iraisam-pirenena. (Jereo Sary Tohiny)
Hita tao amin'ny Pejy facebook n'ny Filoham-pirenena MISY VAHAOLANA NY OLANA REHETRA. ALEFA MIVANTANA TVM NY LALAO ETO MAHAMASINAFantatro ny fitiavan'ny Malagasy ny Barea. Tsapako sy reko ny hetahetan’ny mpankafy baolina kitra Malagasy manerana an'i Madagasikara te hanaraka mivantana ny lalao atao eto amin'ny kianjaben'i Mahamasina iadian'ny Barea sy ny Etopia ny fifanintsanana CAN 2021. Androany tontolo andro dia nitady vahaolana ny tenako sy ny minisitra tomponandraikitra, koa ampifaliana no ilazako etoana amintsika fa hoampitaina mivantana manerana ny Nosy amin'ny alàlan'ny TVM- haino amanjerim-panjakana ny lalao anio eto Mahamasina.ALEFA BAREA Ny Filoha Andry Rajoelina
Sary: Odon Marius Randrianiaina
Natolotra an’i Abel Anicet, Njiva ary Metanire tao amin’ny lapam-panjakana Ambohitsorohitra ny zoma 15 novambra ny mari-boninahi-pirenena «Chevalier de l’Ordre National Malagasy» ho fankasitrahana ny zava-bitan’izy ireo, isan’ny nandrafitra ny ekipam-pirenena niaro ny voninahi-pirenena tamin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika amin’ny baolina kitra taona 2019 natao tany Egypta. Ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina no nanolotra azy ireo izany. Tsy tafaraka tamin’ireo namany sy ny mpanazatra ny Barea an’i Madagasikara, izay efa nandray ny mari-bonahitra tamin’ny 15 jolay 2019 izy telo lahy ireo, satria voatery namonjy ny klioba ilalaovany avy any ampitan-dranomasina vantany vao nifarana ny dian’ny Barea tany Egypta. Nitso-drano ny ekipam-pirenena ny Filoha Andry Rajoelina amin’ny lalao hatrehin’ny Barea etsy Mahamasina ny sabotsy 16 novambra, hifandona amin’i Ethiopia. (Jereo Sary Tohiny)